ISPAIN TILE PATIO (IINDIDI KUNYE NEMIBONO YOYILO) - IIPATIO KUNYE NEEDEKSI
Eyona Iipatio Kunye Needeksi Ispain Tile Patio (Iindidi kunye neMibono yoyilo)
Nasi isikhokelo sethu sepatio seSpain setile kubandakanya izitayile ezithandwayo ezinje ngeterracotta, iSaltillo kunye nemibono yoyilo lwesandla.
Iithayile zaseSpain bezikho ukusukela kwiminyaka yakudala, edla ngokusetyenziswa kakhulu kwiicawa nakwibhotwe. Ezi tile zobugcisa ekugqibeleni ziye zafumana indlela eya kumakhaya abucala, aqhelekileyo asetyenziswa kwiikhikhini, phantsi, kumagumbi okuhlambela, kwaye kunjalo, iipatio.
Amaxesha ahlukeneyo aya kubonisa iindlela ezahlukeneyo kunye nefuthe kwiithayile zaseSpain. Olunye uyilo luneempembelelo ezibonakalayo kubugcisa nakwinkcubeko eyaziwayo ngelo xesha, njengeMeditera, iMexico, njl.
Iithayile zemveli zaseSpain zazikwimo yobugcisa, ngaphaya kokusebenza kwayo kunye nobuhle bayo, kwaye zazisetyenziswa njengendawo yokubonisa izinto ezahlukeneyo ezifana nemizobo.
Lo mfanekiso ungasentla ngumzekelo obalaseleyo weethayile zesiko leSaltillo kubukhulu obahlukeneyo kunye nemibala. Iithayile zifakelwe ukwenza iphethini ye-rosette yeklasikhi, yenza inkcazo ebonakalayo yezikhala kwipatiyo. Uza kubona imibala eyahlukeneyo kunye nokuthambeka kwimibala ye-terra cotta, eqhelekileyo kwiithayile zeSaltillo.
Iindidi zangaphandle zethayile yaseSpain
ITileyillo Tile Patio
Isandla sepeyinti iithayile zaseSpain
Iitayile zeTerracotta Patio
Iithayile zemibala ezihonjisiweyo zaseSpain
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zethayile zangaphandle zaseSpain onokukhetha kuzo. Nazi iithayile ezaziwa kakhulu ezisetyenziswa ngaphandle:
Ngokwesiko iithayile zeSaltillo zicinezelwe ngesandla iithayile zodongwe eziluhlaza ezomeleleyo ezisinika utyikityo lwazo olungalinganiyo ngenxa yomgangatho owenziwe ngesandla.
Ezi ntlobo zethayile zikwanika nembonakalo ye-rustic ngakumbi, kwaye ihlala yomelele ngakumbi. Oku kuhlala kuza ngemibala ye-terra cotta, ukusukela kumbala otyheli, orenji, obomvu, kunye negolide.
Umbala kunye neepateni ziyahluka ngetayile nganye kuxhomekeke kwindlela ezomiswe ngayo, eyinxalenye yomtsalane wezi tile. I-Saltillo ngamanye amaxesha ibizwa ngokuba ziithayile zeTerra Cotta, kwaye iza ngeendlela ezahlukeneyo kunye nobukhulu.
Ngokomndilili, iithayile zeSaltillo zibiza phakathi kwe- $ 5 ukuya kwi-8 yeedola ngonyawo wesikwere. Ixabiso linokuba sezantsi okanye ngaphezulu ngokuxhomekeke kuyilo, umbala, kunye nobukhulu. Iithayile ezenziwe ngeSaltillo ezenziwe ngokwesiko ziya kuthi, ewe, zibize ngaphezulu.
Ukulandela umxholo woyilo, le patio isebenzisa ikakhulu iithayile zecotta zetera emthubi okanye iithayile zeSaltillo. Uza kubona iingcebiso zetera ebomvu zetera kwezinye iithayile, ezibonakala ngokwendalo kolu hlobo lweethayile.
Iithayile ezimenyezelweyo zikwabizwa ngokuba yiMayólica okanye iTalavera, ziithayile ezixhonywe ngee-oxide ezenza ukuba utyikityo lwayo lubonakale lukhazimle, kunye ne-milky-white glaze. Ezi tile zinempembelelo eyomeleleyo yamaSilamsi xa kuziwa kwimibala kunye neepateni, kwaye olu hlobo lwethayile luthandwa kakhulu kuyilo lwalo olupeyintwe ngesandla.
Ixabiso leethayile ezimenyezelayo liya kwahluka ngokuxhomekeka kumbala, ubungakanani, kunye nokuntsonkotha koyilo. Uyilo olwenziwe ngesandla lunokuxabisa kangange- $ 20 ukuya kwi- $ 100 ngetayile nganye. Ngokomndilili, inokubiza naphi na ukusuka kwi- $ 8 ukuya kwi- $ 100 ngonyawo wesikwere.
Kule patio iphangaleleyo, iithayile zecotta ebomvu ezinesitampu ipateni yelitye zidityaniswe neethayile ezenziwe ngombala ezenziwe ngeglasi.
Iithayile ezimenyezelweyo zazisetyenziselwa ukunyuka kwezinyuko zepatio, ukuze kungafuneki ukuba idibane ngqo nokugcwala kweenyawo, ivumela uyilo ukuba luhlale ixesha elide.
Umbala oqaqambileyo oluhlaza okwesibhakabhaka, omhlophe, kunye nobomvu weethayile eziglasiweyo ukongeza isandi esihle kuloo ndawo, siyenza ibe nomtsalane ngakumbi.
Iithayile zesamente kunye neepateni eziphefumlelweyo zamaMoors zazisetyenziselwa ukugxila kule patio yanamhlanje. Inkqubo ye-achromatic yeethayile iyanceda ukudibanisa ngaphakathi, kwaye ikwanike imvakalelo yangoku.
Iithayile zesamente zilulungelelwaniso lwangoku lweetayile zesiko laseSpain ezenziwe ngepeyinti. Iithayile zesamente zibonelela ngokuzinza okungaphaya ngexabiso eliphantsi, zibenza babe lukhetho olungcono kwiindawo ezihamba abantu abaninzi.
Xa kuthelekiswa neethayile zeceramic, ezi ziyamelana nokubuna xa zitywinwe ngokufanelekileyo. Yilindele ukuba ihlale iminyaka! Isibonelelo esongezelelekileyo kukwenziwa kwayo ngokwezifiso - iithayile zesamente zingena kwimibala eyahlukeneyo yemibala kunye neepateni, kwaye zinokulungiswa kwipateni yakho.
Njengama tile akhazimlisiweyo, amaxabiso eethayile zesamente aya kwahluka ngokuxhomekeka kubungakanani, iphethini kunye nemibala. Ixabiso lingahluka naphi na ukusuka kwi- $ 3 ukuya kwi- $ 5 ngonyawo wesikwere, kwaye iya kuba neendleko ngaphezulu koyilo lwesiko.
Nayi eminye imizekelo emikhulu yeethayile zaseSpain onokuzisebenzisa kwipatio yangaphandle:
Le patio isebenzisa indibaniselwano yeetiles zesikwere se-saltillo kunye neetayile ezincinci ezenziwe ngepeyinti njengesiqwengana sokugcizelela, ukwenza ihopscotch (ekwabizwa ngokuba yipinwheel) ipateni yethayile.
Le yeyona ndlela ilungileyo yokwazisa iithayile ezipeyintwe ngesandla kumgangatho wakho wepatio ngaphandle kokuba uchithe imali eninzi kumgangatho ogqityiweyo. Bona Okuninzi iintlobo zeepateni zethayile Apha.
Le patio incinci yangaphandle isebenzisa indibaniselwano yeetyile zetyuwa kwimibala yazo yendalo yecotta okanye iorenji kunye neetoni ezityheli. Iithayile zesikwere ezikhulu zikwiorenji, ngelixa iithayile ezincinci zigxininisa, kwaye zafakwa kwipateni yesikwere sekona /
Ukuthambisa ilokhwe yomtshakazi kumanani apheleleyo
Le patio intle inika i-English vibe yothando ngombala wayo obomvu kunye nokugqitywa kwendalo. Iithayile zeSaltillo zisetyenziswe kwidayimani, kunye neethayile ezimnyama embindini, kwaye zenziwe ngeethayile ezinemibala ekhanyayo ukwenza umphumo ofana nekhaphethi.
Kule patio, kwasetyenziswa amatye amatye endalo ajikelezwe ziipeyinti ezibomvu ukwenza ipateni yokuhamba ejikela kwiziko elijikelezileyo. Ukusetyenziswa kwamatye amancinci kuyinika isibheno sendalo kunye ne-rustic ehambelana nomxholo wegadi yendawo. Bona Okuninzi izimvo zeparaver zepeyinti kweli phepha.
Ngenxa yokuba le yipatio encinci yangaphakathi / yangaphandle, iithayile ezenziwe ngeglasi yokwenyani zisetyenziselwa imigangatho. Iithayile ezimibala-bala zipeyintwe ngesandla zisebenzisa indibaniselwano ye-navy, emthubi, kunye nemibala emhlophe, enika imbonakalo yodidi lweMeditera oluhambelana nolwakhiwo lwangoku lwendawo.
Ngoyilo olwahlukileyo ndwendwela igalari yethu iintlobo zeepatios Apha.
iifoto zothando olufutshane kumfana wakho
kunye nobukhulu bomtshato ebusuku
amanyathelo okutshintsha igama lakho emva komtshato
indlela yokumenza ukuba acele
xoxo intsingiselo kwintombazana